रातो मछिन्द्रनाथ गुठीको सम्पत्ति कति ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
रातो मछिन्द्रनाथ गुठीको सम्पत्ति कति ?
ललितपुर, २१ वैशाख । रातो मछिन्द्रनाथको गुठीलाई पशुपतिनाथको गुठी पछिको नेपालको दोस्रो धेरै सम्पति भएको गुठी मानिए पनि गुठीका नाममा कति सम्पत्ति छ भन्ने अहिलेसम्म यकिन हुनसकेको छैन ।
गुठीको जग्गा संरक्षण र रातो मछिन्द्रनाथको जात्रा सञ्चालनको जिम्मेवार निकाय गुठी संस्थान ललितपुर शाखा यसबारे अनभिज्ञ छ ।
जिल्लाका साविक ४१ गाविसमध्ये आधा भन्दा बढी र साविक ललितपुर उपमहानगरपालिकाका कतिपय वडामा रातो मछिन्द्रनाथको नाममा थुप्रै जग्गा रहेको ललितपुरवासीको भनाइ छ ।
साढे दुईदशक पहिलेसम्म तीन हजार रोपनी भन्दा बढी जग्गा विभिन्न स्थानमा रहेको पाइएको ज्योतिष दैवज्ञ कीर्तिमदन जोशी बताउनुहुन्छ । उहाँका बुबाले विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गा कहाँ र कति छ भनेर लेखेर गुठी संस्थान ललितपुर शाखामा दिनुभएको थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “बुबा बितेपछि न त अरु कसैले चासो देखाएको पाइयो न गुठीले नै आफ्नो सम्पत्ति खोजी गरेको छ ।”
गुठीको स्वामित्व रहेको मछिन्द्रनाथको नाममा झण्डै डेढ सय रोपनी तौनाथी जग्गा रहेको शाखाका प्रमुख शैलेन्द्र पौडेल बताउनुहुन्छ । “यो मोही पनि नलागेको जग्गा हो । आम्दानीका हिसाबले यो जग्गालाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण जग्गा मानिन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,” “तर ती जग्गाबाट पनि हामीले फाइदा लिनसकेका छैनौं ।” गुठीका नाममा भएका जग्गा वा कवल कुनै पनि कार्यालयले चलन चल्तीको भाडामा लगाउन नसक्दा आम्दानी गर्न नसकेको हो । रातो मछिन्द्रनाथको जस्तै अरु विभिन्न मठ मन्दिरका जग्गाबाट पनि गुठीले आम्दानी लिनसकेको छैन ।
गुठीका नाममा भएको ३९५ रोपनी छ आना एक दाम जग्गामा मोही लागेको छ । मोही लागेका जग्गामध्ये कतिपयमा रकमे आफैंले र कतिमा गुठीले आयस्था लिने गरेको छ । भmण्डै डेढसय भन्दा बढी जग्गा मछिन्द्रनाथ गुठीको भए पनि दर्ता हुन नै बाँकी रहेको प्रमुख पौडेल बताउनुहुन्छ । बोसी (मछिन्द्रनाथको जात्रामा रथका लागि काठ काट्ने जाती) का लागि छुट्याइएको १४४ रोपनी जग्गा दर्ता हुन बाँकी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “कतिपय जग्गा दर्ताको प्रक्रियामा भए पनि प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ’ अझै धेरै जग्गा दर्ता हुन बाँकी छ ।”
गुठीको जग्गा रैतानी(व्यक्तिगत) गर्न नपाउने नियम बन्नु पहिले मछिन्द्रनाथको जग्गा पनि रैतानी भयो । छयस एक रोपनी छ आना एक दाम जग्गा रैतानी भएको गुठीको तथ्यांकले देखाएको छ । रैतानी जग्गाको रकम अक्षयकोषका रुपमा राखिएको छ । त्यो पनि जात्रा सञ्चालनका लागि खर्च हुन्छ । मछिन्द्रनाथको आम्दानीले जात्रा धान्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रमुख पौडेल बताउनुहुन्छ, “मोहीले बुझाउने कुत, अक्षयकोषको पैसा र गुठीका जग्गामा घर बनाउदा लिने दस्तुर नै आम्दानीको स्रोत हुन् ।’’
विभिन्न व्यक्तिले गुठीको तैनाथी जग्गालाई लामो समयदेखि प्रयोग गर्दैआएका छन् । उनीहरुबाट गुठीले नगन्य रकम वा त्यो पनि पाएको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “गुठीले सबैभन्दा आम्दानी गर्नसक्ने तैनाथी जग्गा भए पनि उपयोगमा ल्याउन सकेको छैन ।”
गुठी संस्थान आफ्नो सम्पत्तिको खोजी र संरक्षणमा लाग्नुपर्नेमा ज्योतिष दैवज्ञ जोशी जोड दिनुहुन्छ । गुठीका जग्गा विभिन्न किसिमले प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिले पनि इमान्दार भएर तिरो तिर्नुपर्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “भगवानको नाममा भएको जग्गा भोग–चलन गर्नेले धर्म सम्झेर र इमान्दार भएर तिरो तिर्नुपर्छ ।”